China Bright 1100 1050 3003 Aluminum Aluminium Saxan 3 Bar 5 bar Muraayad Soo -saaraha Waraaqda Aluminium la safeeyey iyo Alaab -qeybiye | Ruiyi
Shaqada ugu weyni waa ka-hor-tagga iyo qurxinta. Waxay leedahay adeegsiyo baaxad leh, oo inta badan loo adeegsado dhismaha iyo gaadiidka. Alwaaxyada Aluminium ee qurxinta leh waxay ka tirsan yihiin taxanaha darfaha aluminium saafi ah. Marka loo eego mabda'a magac -bixinta astaanta caalamiga ah, heerka u qalma ee ka kooban aluminium ee shabaggii qurxinta aluminiumku wuxuu ka sarreeyaa 99.5%. Sababtoo ah nadaafadda sare ee giraanta aluminiumka iyo habka wax -soo -saarka oo aad u fudud, qiimuhu waa mid raqiis ah. Waa taxanaha inta badan loo isticmaalo warshadaha caadiga ah. Noocyada hannaanka caadiga ah ee alwaaxyada aluminiumka ah ee qurxinta leh waa 1, 2, 3, iyo 5. Marka dalabka suuqyadu isbeddelo, waxaa jiri doona noocyo badan oo kala duwan oo taargooyin ah.
Biraha aluminiumka khafiifka ah waxaa loola jeedaa dhumucda xaashida aluminium ee mm waa inta u dhaxaysa 0.15 iyo 2.0mm. Waxaa ka mid ah, xaashida aluminium qaro weyn 0.5 mm, 1mm xaashi aluminium iyo saxan aluminium 2mm ayaa ah cabbirrada aluminiumka ugu caansan. Haddii aad ku cabbirto dhumucda saxanka aluminium inji, 1 16 xaashida aluminiumku waa qiyaastii dhumucdiisuna tahay 1.5mm, oo xaashida noocan ah sidoo kale waxaa iska leh aluminium xaashi khafiif ah. Marka la eego xaashida aluminiumka khafiifka ah, xaashida aluminiumka ee cabbirkeedu yahay 12 (2.0mm), 14 xaashi aluminium (1.6mm), 16 xaashi aluminium (1.3mm) iyo 18 xajmiga aluminium (1.2mm) dhammaantood waxay ka tirsan yihiin qaybtan.
Xaashidan aluminiumka khafiifka ah waxay leedahay codsiyo aad u ballaaran, gaar ahaan warshadaha qurxinta dhismaha. Qalabka iftiiminta dhismayaasha kala duwan, gurigeena, iskuulka, isbitaalka, suuqa dukaameysiga iwm. Muuqaalka iyo cimriga labadaba, gogosha khafiifka ah ee aluminiumku labaduba way na qancin karaan. Intaa waxaa dheer, birtaan aluminium -ka ah ee dhuuban ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida iftiinka qoraxda, waxayna wax weyn nooga tari kartaa keydinta tamarta.
Aluminium Alloy 1100 waa aluminium saafi ah oo warshadeysan, waxa ku jira aluminiumka (jajab ballaaran) waa 99.00%, mana lagu daaweyn karo kuleyl. Waxay leedahay iska caabin daxalka sare, conductivity korontada iyo conductivity kaamerada, cufnaanta waa yar yahay, caag waa wanaagsan yahay, iyo qalabka aluminium kala duwan lagu soo saari karaa cadaadis
ka shaqaynta, laakiin xooggu wuu hooseeyaa. Bandhigyada kale ee geedi socodku asal ahaan waxay la mid yihiin 1050A.
1100 saxan aluminium aluminium / gariiradda aluminiumka waxaa badanaa loo adeegsadaa sameynta iyo hagaajinta guryaha, iska caabinta daxalka oo sare, umana baahna xoog sare, sida cuntada iyo kiimikada iyo maaraynta iyo qalabka kaydinta, alaabta birta ah, qalabka godan ee duubista iyo rogid, iyo furayaasha isku -darka alxanka. , milicsiga, kaadhadhka magaca, iwm.
Daawaha Aluminium 1050 waxaa lagu yaqaanaa iska caabinta daxalka oo aad u fiican, ductility sare iyo dhammaystir aad u milicsanaya
1050-H24 aluminium waa 1050 aluminium oo ku jira xanaaqa H24. Si aad u gaarto cadhadaas, biraha ayaa la adkeeyaa, ka dibna qayb ahaan ayaa la siidaayaa, oo xoogaa kala badh u dhexeeya annealed (O) iyo si adag (H28).
Garaafyada garaafyada ee kaararka guryaha ee hoos ku qoran waxay isbarbar dhigaan aluminiumka 1050-H24: 1000-taxane alloys (sare), dhammaan aluminium aluminium (dhexda), iyo dhammaan keydka xogta (hoose). Bar buuxa waxaa loola jeedaa tan waa qiimaha ugu sarreeya ee ku habboon. Bar bar-buuxa ah micnaheedu waa 50% kan ugu sarreeya, iyo wixii la mid ah
Waxaan bixin karnaa
Aluminium tread Brite plate, Aluminium tread Brite plate, Aluminium saxan hubiyaha hubiyaha, soo saare xaashida aluminium dahaarka leh, soo saarayaasha saxanka aluminium, Warshadda xaashida aluminium, birta saxan aluminium
Codsiyada iyo shaqooyinka
Baadhaha hubinta aluminiumka ee 5754 h114 ayaa aad ugu habboon codsiyada leh shuruudo waxqabad oo sarreeya, sida maraakiibta dalxiiska ee waawayn, munaaradaha dabaysha gudaha, maraakiibta/dabaqyada/derbiyada dhexdooda, buundooyinka dadka lugaynaya, jaranjarada shaqada hawada, aaladaha warbaahinta, iwm.
1050 alwaax aluminium ah 6061 sabuurad aluminium ah oo loogu talagalay dabaqa gaadiidka dadweynaha iyo dabaqa musqusha dadweynaha
5086 Aluminum shabaggeedii gaadiidka qaboojiyaha
4017 alwaax aluminium ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa qurxinta dhismaha
Hore: 6061-T651 Sheet Aluminium
Xiga: Shiinaha PVDF dahaadhay aluminium guddi ka kooban ACP sheet warshad guddi ACP
Diamond Tread Aluminium
Dheemanka Tuman ee Aluminiumka Qalinka ah
Sheet Tread Diamond
Birta Sheet Tread Diamond
5052 6061 6063 7075 Dheemanka Aluminium ee Checkered ...